ANDROID ပေါ်မှာ MANGA ကိုဖတ်ရှုခြင်းအဘို့အလျှောက်လွှာ - အန်းဒရွိုက် - 2019
Android ပေါ်မှာ manga ကိုဖတ်ရှုခြင်းအဘို့အလျှောက်လွှာ
သင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသေမင်း၏မကြာခဏအပြာရောင်မျက်နှာပြင်ပေါ်လာဖို့စတင်ကြလျှင်, အမှားအရေအတွက်ကချရေးနှင့်၎င်း၏ဖြစ်ပျက်မှုများ၏အင်တာနက်အကြောင်းတရားများအပေါ်ကြည့်ရှုပါ။ ဒါဟာပြဿနာအစိတ်အပိုင်းများကို (မကြာခဏ hard disk ကိုသို့မဟုတ် RAM ကို) မဆို၏လုပျငနျး၏ချွတ်ယွင်းနေသဖြင့်စေဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာအကြှနျုပျတို့ RAM ကိုစစ်ဆင်ရေးစစ်ဆေးသည်မည်သို့ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: က Windows7မှာ BSoD အသုံးအများဆုံး codes တွေကိုနှင့်စစ်တိုက်ခြင်းငှါအဘယ်သို့
အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းကြောင့်အမှား RAM ကိုကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်နိုင်သည့်အများအပြား features တွေရှိပါတယ်:
မကြာခဏနံပါတ်များနှင့် 0x0000000A အမှား 0x0000008e နှင့်အတူသေခြင်း၏အပြာရောင်မျက်နှာပြင်ပေါ်လာ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအပြစ်ရှာညွှန်ပြသောအခြားအမှားအယွင်းများရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။
ဂရပ်ဖစ်နှင့်ပိုပြီးအတူလုပ်ကိုင်သည့်ဂိမ်းများကိုစဉ်အတွင်း, ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှု, - လေးလံသောမှတ်ဉာဏ်အောက်မှာထွက်ခွာ။
အဆိုပါ Monitor ပေါ်မှာ Distort ပုံရိပ်။ ဤသည်လက္ခဏာကဗီဒီယိုပြဿနာများအကြောင်းကိုပိုမိုပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံအကြောင်းရင်းပြုမူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအထကျရောဂါလက္ခဏာတွေမဆိုစောငျ့ရှောကျပါလျှင်စကားမစပ်ကပြဿနာကွန်ပျူတာ၏ RAM ကိုအတူကြောင်းကိုမဆိုလိုပါ။ သို့သော်ထိုသို့တန်ဖိုးရှိမယ့်စစ်ဆေးပါ။
နည်းလမ်းများ RAM ကိုစမ်းသပ်
အပိုဆောင်း software ကိုသုံးပြီးနဲ့ Windows tools တွေကိုမှသီးသန့်အသွင်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြကဲ့သို့မှတ်ဉာဏ်စစျဆေးဖို့တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူမှရရှိနိုင်အများအပြားနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့သည်သင်တို့မှအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်အချို့နည်းစနစ်မှာကြည့်ပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: RAM ကို၏စစ်ဆေးခြင်းကိုဘို့ဆော့ဝဲ
Method ကို 1: Windows ကိုမှတ်ဉာဏ် Diagnostic Utility ကို
Windows ကိုမှတ်ဉာဏ် Diagnostic Utility ကို - RAM ကိုစစ်ဆေးနေများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံး tools တွေကိုတစ်ခုမှာ။ ဒီထုတ်ကုန်အမှား၏ရှေ့မှောက်တွင်များအတွက်အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာမှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်မှုများအတွက် Microsoft ကအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲသုံးစွဲဖို့, သင် Bootable media တစ်ခုလုပ်ရအောင် (USB flash drive ကိုသို့မဟုတ် disk ကို) ဖန်တီးရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကဘယ်လိုအောက်ပါဆောင်းပါးကိုတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်:
သင်ခန်းစာကို: ဘယ်လို bootable USB flash drive ကိုဖန်တီးရန်
ထိုအခါသင်သည် (ကြှနျုပျတို့ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်, သင်ခန်းစာဖို့ link ကိုစွန့်ခွာလိမ့်မယ်) ကွန်ပျူတာထဲမှာ drive ကိုချိတ်ဆက်နှင့် USB drive ကိုရန် BIOS ကို Boot တက်ဦးစားပေး install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ Windows ကိုမှတ်ဉာဏ် Diagnostic RAM ကိုစတင်စမ်းသပ်စတင်ပါ။ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည့်စစ်ဆေးရေးကာလအတွင်း အကယ်. အမှားများဖြစ်ကောင်းန်ဆောင်မှုစင်တာကိုဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာကို: ကို USB drive ကနေ boot ဖို့ BIOS ကို Configuring
Method ကို 2: MemTest86 +
MemTest86 + - RAM ကိုစမ်းသပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များတစ်ခုမှာ။ ယခင်ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အမျှ, သင်ပထမဦးဆုံး MemTest86 + ဖြင့်တစ်ဦး bootable USB flash drive ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။ သင့်ထံမှနီးပါးမည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမလိုအပ်ပါဘူး - ကိုယ့်ကွန်ပျူတာသို့မီဒီယာထည့်သွင်းခြင်းနှင့် USB drive ကနေ boot ဖို့ BIOS ကို select လုပ်ပါ။ ရလဒ်ကိုချက်ချင်းပြသပါလိမ့်မည်, RAM ကိုစမ်းသပ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ခန်းစာကိုဘယ်လို MemTest သုံးပြီး RAM ကိုစမ်းသပ်ဖို့
Method ကို 3: အဆိုပါစနစ်သည်စံ tools များ
Windows ကိုဒီအထူး tool ကိုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းသင်, မည်သည့်အပိုဆောင်း software ကိုရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲမှတ်ဉာဏ်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Windows ကိုမှတ်ဉာဏ် Diagnostic"။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ Ctrl + ဦးဝင်း + R ကို တစ်ဦးပေးတဲ့ dialog box ကိုဖွင့်ရောက်စေဖို့ကီးဘုတ်ပေါ် "Run ကို" နှင့် command ကိုရိုက်ထည့်mdsched။ ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
တစ်ဦးကဝင်းဒိုးကိုယခုသို့မဟုတ်နောက်မှသင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖွင့်လာမယ့်အချိန်စစ်ဆေးမှုများအဘို့သင့်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်သည့်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင့်လျော်သော option ကိုရွေးချယ်ပါ။
ပြန်လည် reboot လုပ်ပြီးနောက်, သင်မှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်မည့်မျက်နှာပြင်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကလစ် နှိပ်. F1 ကို ကီးဘုတ်ပေါ်, သငျသညျ, သငျသညျစမ်းသပ်မှုများ၏အစုကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ရှိရာ setting များကို menu ကို, စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများ၏အရေအတွက်ဖြတ်သန်းညွှန်ပြအဖြစ် cache ကို enable သို့မဟုတ် disable ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ပြည့်စုံသည်နှင့်ကွန်ပျူတာကိုထပ်က Restart ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးနောက်သင်စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုအပေါ်တစ်ဦးအကြောင်းကြားစာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့အသုံးပြုသူအမှားပျက်ယွင်းနေ RAM ကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကွန်ပျူတာ၏စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသုံးခုနည်းလမ်းများမှာကြည့်ရှုကြ၏။ အထက်ပါနည်းလမ်းများတစ်ဦးနှင့်အတူ RAM ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းအမှားအယွင်းများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြလျှင်, ငါတို့သည်သင်ကျွမ်းကျင်သူများကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် module ကိုအစားထိုးရန်ကြောင်းအကြံပြုပါသည်။
အဆိုပါဂိမ်း spurts, သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်နှေးကွေးအတွက်တတ်၏။ အဘယ်အရာကိုကအရှိန်မြှင့်ရန်ပြုမိဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
ဗီဒီယိုကို Videomastere ချပြီး
သည် EPS format ကိုဖွင့်ပါ
Ping (ping ရဲ့) သို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ကွန်ယက်ကိုဂိမ်းများကိုဆီးတားကဘာလဲ? သင့်ရဲ့ Ping လျှော့ချဖို့ဘယ်လို
Windows ကိုသော့ခတ်ခြင်းနှင့် SMS ပို့ဖို့လိုအပ်လျှင်အဘယ်သို့ပြုသနည်း
Odnoklassniki အတွက်အမှတ်အသား (ID) တစ်ခုစီကိုအသုံးပြုသူအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်လျှောက်လွှာဖို့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်နံပါတ်များကိုအစုတခုတူပေမယ့်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ဥပမာ, applications များအုပ်စုများ၏ဖြစ်ရပ်နှင့်ရပ်ရွာ / ဂိမ်း၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သောအသုံးပြုသူက configured နိုင်ပါသည်။ Odnoklassniki အတွက် ID ကိုစာမျက်နှာ ID ကိုကလိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်သင်ယူနိုင်ရန်အတွက်, Odnoklassniki အားလုံးကိုစာမျက်နှာများရှိပါတယ်ကတည်းက: သင်စိတ်ဝင်စားနေစာမကျြနှာသို့သွားပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
Samsung က SCX 4220 ပရင်တာများအတွက် Download လုပ်ပြီး install ယာဉ်မောင်း
PC ပေါ်မှာ 2019 ခုနှစ်၏ထိပ်တန်း 10 ဦးအများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်း